Umaki: magento | Martech Zone
I-Gorgias: Kala Umthelela Wemali Engenayo Yesevisi Yakho Yekhasimende Le-Ecommerce
UMsombuluko, May 23, 2022 UMsombuluko, May 23, 2022 Douglas Karr
Ngenkathi inkampani yami ithuthukisa uhlobo lwesitolo sezingubo eziku-inthanethi, sakwenza kwacaca ebuholini benkampani ukuthi isevisi yamakhasimende izoba ingxenye ebalulekile yempumelelo yethu yonke ekusunguleni isitolo esisha se-e-commerce. Izinkampani eziningi kakhulu zibambeke kakhulu ekwakhiweni kwesayithi futhi ziqinisekisa ukuthi konke ukuhlanganiswa kuyasebenza kangangokuthi ziyakhohlwa ukuthi kunengxenye yesevisi yamakhasimende engenakushaywa indiva. Kungani Isevisi Yekhasimende Ibalulekile Ku
I-Onollo: Ukuphathwa Kwemidiya Yezenhlalo ye-Ecommerce
NgoLwesibili, Septhemba 7, 2021 NgoLwesibili, Septhemba 7, 2021 Douglas Karr
Inkampani yami ibisiza amakhasimende ambalwa ngokusebenzisa nokwandisa imizamo yabo yokuthengisa eShopify eminyakeni embalwa edlule. Ngoba i-Shopify ine-sharehare enkulu embonini ye-e-commerce, uzothola ukuthi kukhona ithoni lokuhlanganiswa okukhiqizwayo okwenza impilo ibe lula kubathengisi. Ukuthengiswa kwezentengiselwano kwezenhlalo zase-US kuzokhula ngaphezu kwama-35% ukudlula ama- $ 36 billion ngo-2021. Insider Intelligence Ukukhula kwezentengiselwano kwezenhlalo kuyinhlanganisela yokuhlanganiswa
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 23, i-2021 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 23, i-2021 Douglas Karr
Enye into ethokozisayo embonini yami ukwenziwa kwezinto ezintsha okuqhubekayo kanye nokwehla okumangazayo kwezindleko zamapulatifomu ezentengiselwano ezidayiswe kakhulu. Lapho amabhizinisi ake asebenzisa khona amakhulu ezinkulungwane zamaRandi (futhi asakwenza namanje) ezisekelweni ezinhle… manje izindleko zehle kakhulu ngenkathi ama -etsetets eqhubeka nokuthuthuka. Muva nje besisebenza nenkampani yokugcwalisa imfashini yebhizinisi ebikulungele ukusayina inkontileka yesikhulumi esizobabiza ngaphezu kwesigamu sesigidi
Ukuthumela okulula: Intengo yokuhambisa, ukulandela ngomkhondo, ukufaka ilebula, izibuyekezo zesimo, nezaphulelo ze-ecommerce
NgoLwesibili, Januwari 5, 2021 NgoLwesine, Februwari 18, 2021 Douglas Karr
Kukhona ithoni yokuxakaniseka ne-ecommerce - kusuka ekucutshungulweni kokukhokha, ukwenziwa kwezinto, ukugcwaliseka, kuze kufike ekuthumeleni nasekubuyiseni - izinkampani eziningi ezingazinaki njengoba zithatha ibhizinisi lazo online. Ukuthumela, mhlawumbe, kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu kunoma yikuphi ukuthengwa kwe-inthanethi - kufaka phakathi izindleko, usuku lokulethwa olulinganiselwayo, nokulandela ngomkhondo. Izindleko ezingezekile zokuhambisa, izintela, nezimali zikhokhelwe ingxenye yazo zonke izinqola zokuthenga ezishiyiwe. Ukulethwa okuhamba kancane kwakubhekele i-18% yezitolo ezishiyiwe